Nagu saabsan - Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd.
Xawaare Jaban EV / Gaari Golf / Gaariga Nadiifinta / RV
Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd. Waa shirkad tiknoolajiyad sare leh, oo ku takhasustay R&D iyo suuqgeynta alaabta batari-ka dib loo buuxin karo ee Lithium. Iyada oo hal-abuurnimo farsamo iyo maamul cilmiyaysan, Lithtech waxay aasaastay koox heerka koowaad ah oo injineero ah, naqshadeeyayaal, hal-abuureyaasha R&D, maareeyayaasha wax soo saarka, hubinta tayada iyo iibka / adeegga macaamiisha. Kuwaasoo si buuxda ugu hawlan cilmi baarista & horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta baytariyada tayada sare leh ee lithium,
Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyo buuxa oo ah alaabooyinka batteriga loo habeeyay, oo ay ku jiraan naqshadeynta batteriga, horumarinta, unugyada xulashada iyo BMS, Xeedho, Waxaan u adeegnaa xalka buuxa ee batteriga iyo ilaha adeegsiga ee joogsiga macaamiisha. Taasi waa sababta dad aad iyo aad u badan u yaqaanaan Lithtech Energy dal iyo dibadba.
Alaabteena bateriga Lithium waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa keydinta UPS tow Taawarrada isgaarsiinta 、 Nidaamka keydinta tamarta qorraxda vehicles Gawaarida korantada 、 AGV 、 Golf-cart 、 Wadada nadiifiyaha cycle mootada korantada 、 qorraxda waddada 、 iyo qalabka korontada iwm.
Sidaan wada ognahay, batteriga Lithium waa unugga batteriga ugu isticmaalka badan warshadaha elektarooniga ah. waa miisaanka fudud, deegaanka, nolosha wareegga dheer, sidaa darteed Waxay noqon laheyd bedelka wanaagsan ee batteri-acid-ka, Lithtech ayaa ku siisa waxaad u baahan tahay.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah shirkadaha sii kordhaya ee batari-ga khibrad u leh isku-xirnaanta batroolka / Alaab-qeybiye batrool ee Shiinaha. Lithtech waa da 'yar, firfircoon oo hal abuur leh, waxaan sii wadaynaa inaanu horumarino alaabada fikradaha hal abuurka leh iyo tikniyoolajiyad horumarineed mustaqbalka, Waxaan aaminsanahay inaan aduunka u keeni karno nolol tayo wanaagsan anagoo kor uqaadeyna teknoolojiyada batroolka Lithium dhamaan codsiyada nolosheena.
Tamarta Cusub ee Nolosha Cusub Kusoo dhawow Lithtech!
Waxaan leenahay warshad casri ah oo la casriyeeyay waxaana ka shaqeeya in ka badan 100 shaqaale.
Keen alaabooyinka hal abuurka leh suuqa si xowli ah; Kordhi isku halaynta tayada wax soo saarka.
Haddii loo baahdo, waxaan bixin karnaa shahaadooyinka diiwaanka elektarooniga ah laakiin dukumiintiga asalka ah waa in lagu hayaa shirkadda.
waxaan leenahay naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah iyo farsamo yaqaanno si ay u bixiyaan caawimaad farsamo
Dhiirrigelinta xirmada batteriga
Ku guuleysiga heerka MW ESS
Horumarinta nidaamka keydka saldhigga 5G
Lagu siiyay Natinal Hight-tech Enterprise
Waxaa lagu ansixiyay "Qorshaha Peacock National" Mashruuca iskaashatada hibada
In kabadan 20.000 oo cutub oo ah nidaamyada batari lithium ayaa lagu bixiyay HESS iyo gawaarida xawaaraha yar
Iskaashatada wershaddii Pack, koox xirfadlayaal ah ayaa la sameeyay
Dhisay iskaashi istiraatiiji ah oo lala yeesho Shirkadda Gawaarida Deegaanka ee Nanning, Dalian Rongke Power, SIASUN
Lithtech ayaa la aasaasay, oo loogu talagalay inay bixiso xalka batteriga lithium